Kubhadhara zvifambiso zvevoruzhinji muSingapore neApple Pay inogona kunge iri yechokwadi mu2018 | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Apple Pay, Noticias, dzakawanda
Apple Pay yaizosangana neSingapore Land Transit Authority, kuti iite bvunzo dzekutyaira muripo wemabhazi uye matikiti ezvitima munyika yeAsia.. Sezviri pachena, iye tekinoroji mudiwa angave MasterCard, iyo yaizopa zvakafanira Hardware kuti ikwanise kubhadhara neApple yekubhadhara chikuva kubva ku2018, kana bvunzo dzakaitwa dzichigutsa. Iko kuvandudzwa kweprojekiti yakaitwa nevakuru veSingapore kubva munaKurume apfuura. Inozivikanwa nezvidimbu zveABT, ivo vanovavarira kurerutsa muripo mune zvekufambisa nzira, kusanganisa vaverengi nenzira dzisinga bate, kunyanya makadhi echikwereti uye EMV.
Muedzo wakaitwa uine € 100.000 iyo inopa kutenderera zviuru makumi matanhatu pazuva. Iyo kambani ine peji rekunyorera rakavhurika kune avo vanoda kuyedza yekubata tikiti sevhisi. Ose mashandiro akanyorwa muhurongwa, pamwe nechero zviitiko zvingashandiswa nevashandisi. Mushure meichi chikamu chekutanga, lIvo vanogadzira chirongwa ichi vane chinangwa chekuvhura iyo yekubhadhara system kune emagetsi nzira, senge wachi kana nhare.
Iye CEO weLTA, Ngien Hoon Ping, kambani iri kuita chirongwa ichi:
LTA inobatanidzwa mukugonesa vafambi kunakidzwa neyakareruka iyo yekubhadhara kwemagetsi kunounza pane ruzhinji rwekufambisa. Pamwe chete nevatinoshanda navo, isu tinoshanda pamwe pakuwedzera kwekutyaira kweABT, kuwedzera uye pakupedzisira kutumirwa zvachose, kuve nhanho huru yekuchinja kwedu kuenda kune vafambi-centric zvemagetsi kubhadhara.
Asi Singapore haisiriyo yega inonyorera kubhadhara muripo wezvifambiso zveruzhinji zvekubhadhara kubva kumagetsi zvigadzirwa. Mamwe maguta akaita seNew York ari kuyedza iyo MTA yekufambisa network sevhisi. Kutanga kwayo-kumusoro kunotarisirwa pakati-2018.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kubhadhara zvifambiso zvevoruzhinji muSingapore neApple Pay inogona kunge iri yechokwadi mu2018